हाम्रा सन्तानले कहिले ‘ह्याप्पी चासोक तङनाम’ भन्ने ? - Nigranitimes
होमपेज / राष्ट्रिय / हाम्रा सन्तानले कहिले ‘ह्याप्पी चासोक तङनाम’ भन्ने ?
हिजो म सँग असम्बन्धित कुराहरू जबरजस्ती म सँग सम्बन्धित बनाइयो । आज मेरो सन्तानलाई पनि उ सँग असम्बन्धित कुरालाई जबरजस्ती सम्बन्धित बनाउने क्रम जारी छ । हामीले बनाएको समाज र व्यवस्थाप्रति यही कुरामा घोर विमति राख्छु । प्रसङ्ग मेरो छोरीले मेरो मुख हेरेबाट सुरु गरौँ– बिहानै उठेर एउटा कार्ड बनाइन् । त्यो कार्ड हातमा थमाइन र भनिन्– ‘ह्याप्पी फादर्स डे’ ! म अचम्मित मात्र भइन, मेरो मथिङ्गल हल्लियो । सद्भाव मानेर भने– ‘थ्याङ्क्यु’ !
मेरो अस्तित्व स्वीकार्ने भए– जसरी मलाई तिमी र तिम्रो अस्तित्वबारे थाहा छ, त्यसरी नै म र मेरो अस्तित्वबारे तिमीलाई थाहा हुनु पर्छ । त्यो भन्दा पहिले तिम्रोबारे मलाई थाहा हुने तर मेरोबारे तिमीलाई थाहा नहुने संरचनागत विभेद अन्त्य हुनु पर्छ। जसका लागि तिम्रो र मेरो सन्तानले हामी दुवैको अस्तित्वबारे थाहा पाउनु पर्छ। अनि मेरो सन्तानले ‘ह्याप्पी दसैँ’ र तपाईँका सन्तानले ‘ह्याप्पी चासोक तङ्नाम’ भन्ने छन्। त्यो पल साँच्चिकै रोमाञ्चक हुनेछ । अनि, आनन्दको श्वास फेरिनेछ । मेरो संसारबाट साभार